इरानी युवती किन असाध्यै सुुन्दरी हुन्छन ? यस्तो छ ८ रहस्य – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियइरानी युवती किन असाध्यै सुुन्दरी हुन्छन ? यस्तो छ ८ रहस्य
एजेन्सी- आकर्षक को हुन् ? यसमा सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । भूगोल र समुदाय अनुसार सुन्दरताको मापन पनि भिन्न भिन्नै हुनसक्छ ।कतै कालो छाला मन पराइन्छ भने, कतै गोरो । कतै पातलो ओंठलाई आकर्षक मानिन्छ, त कतै मोटो ओंठलाई । कसैले सलक्क केस रुचाउँछन् भने, कसैले कर्ली ।
यद्यपी झट्ट हेर्दा हामी जस्तो सौन्दर्यबाट मोहित हुन्छौं, त्यसमा अधिकांशको मन मिल्छ । यस हिसाबले सौन्दर्यको चर्चा गर्दा इरानी महिलाहरु अग्रस्थामा पर्छ । आँखा, अनुहारको बान्की, शरीरको बनौटले उनीहरुतर्फ सबैको ध्यान खिचिन्छ ।इरान एक मु’स्लिम बहुल देश हो । त्यहाँ महिलाको जीवन त्यती सहज छैन । यद्यपी सुन्दरताको कसीमा उनीहरुले विश्वका महिलाहरुलाई उछिन्छन् ।
वं’शा’नु’गत गुण:इरानी महिला सुन्दर हुनुको कारण वं’शा’नु’गत गुणलाई दिइन्छ । अर्थात वं’शा’नुगत रुपमै उनीहरु सुन्दर एवं आकर्षक अनुहार लिएर जन्मन्छन् । ज’न्मजा’त उनीहरुले सुन्दर अनुहार पाउँछन् ।
भौगोलिक प्रभाव:इरानी महिला संसारभरकै सुन्दर मानिनुको कारण त्यहाँको भूगोल पनि हो भनिन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा उनीहरु बाँचेको भूगोल र प्राकृतिकले यसमा खास भूमिका खेलेको छ ।
खानपान:इरानी महिला आकर्षक हु’नुमा उनीहरुको खा’नपानले पनि काम गरेको छ । भनिन्छ, उनीहरु खानपानमा ज्या’दै सर्’तक छन् ।इ’रानी महिला आकर्षक हुनुमा उनीहरुको जन्मजात गुण त छँदैछ, त्यसमाथि उचित खानपान नै हो ।
इरानी महिलाहरुले आफ्नो डाइटमा माछा र ओखर सामेल गर्छन् । उनीहरु मह पनि नियमित रुपले सेवन गर्छन् ।इरानी महिलाहरु विशेषगरी गहुँलाई पिनेर बनाइएको खाना ‘बल्गर’ खाने गर्दछन् । यसले अनुहारको छालाको चमकका साथै शरीरीक बनावटलाई नियन्त्रित गर्ने गर्दछन् ।
अनुहारको म’साज:इरानी महिला आफ्नो अनुहारलाई नरिवलको तेलले म’साज गर्दछन् । नरिवलको तेलले छालाको च’मक बढाउँछ । जसका कारण बढ्दो उमेरको असर अनुहार दश भन्दा कम देखिन्छ । ओंठलाई सुन्दर बनाउनका लागि उनीहरु अनारको तेलको प्रयोग गर्छन् ।
गुलाबको पानीले अनुहार धुने:इरानी महिलाहरु गुलाबको पानीले अनुहार धुने गर्छन् । खराब अनुहार सुन्दर बनाउन यसले राम्रो काम गर्छ । गुलाबको पानीमा भिटामिन ए र ई हुन्छ, जो स्वस्थ्य छालाको लागि एकदमै आवश्यक मानिन्छ ।इरानकी एक मोडलले दिएको अन्र्तवार्तामा यो रहस्य खुलाएकी थिइन् ।
दही र पुदिनाको से’वन:उनीहरु धेरै भन्दा धेरै दही तथा पु’दिनायु’क्त पे’य पदार्थ ‘शि’नेना’को सेवन गर्दछन् । यसको से’वनले अ’नुहारको छाला तथा कपाललाई स्व’स्थ राख्नुका साथै अनुहारमा चा’उरीपना हुन दि’दैन ।
सुप से’वन:इरानी महिला विशेषगरी, दही , तरकारी तथा मा’सुबाट बनेका सुपका सेवन अ’धिक मात्रामा गर्दछन् । यसले सौन्दर्य ब’ढाउनुका साथै शरीरको तौलन नियन्त्रित रहन्छ ।
स’र्ज’रीको साहारा:इरानी महिलाहरुमा प्ला’ष्टिक स’र्जरी’को क्रे’ज बढ्दो क्रममा छ । प्लाष्टिक स’र्जरी’कै कारण पछिल्लो समय उनीहरु आर्कषक देखिन थालेका छन् ।